प्रचण्डद्वारा भरतपुर अस्पतालको निरीक्षण – Halkaro
प्रचण्डद्वारा भरतपुर अस्पतालको निरीक्षण
चितवन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार भरतपुर अस्पतालको निरिक्षण गरेका छन् । दिउसो १ बजे अस्पताल परिसर पुगेका प्रचण्डले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको खाली जमिन, आकस्मिक कक्ष, टिकट काउण्टर लगाएतको निरिक्षण गरेका थिए ।
निरिक्षण पश्चात अध्यक्ष प्रचण्डले अस्पतालको स्वामित्वमा भएर अन्य संघसंस्थाले भोगचलन गरेको जमिन फिर्ता ल्याउने अभियानमा लाग्न अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रचण्डले अस्पताललाई ब्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
निरिक्षणका क्रममा विरामीको निकै भिडभाड देखेपछि प्रचण्डले कसरी ब्यवस्थापन गर्नुभएको छ भनेर सोध्नुभएको थियो । भिडभाडकै वीचमा रहेका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रविन खड्काले यस अघिका समितिहरुले अस्पतालको जग्गा फिर्ता लिन गरेको प्रयास बारे प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए ।
उहाले स्रोत, साधन र कर्मचारीको अभावमा भिड ब्यवस्थापनमा जटिलता कायमै रहेको प्रतिकृया दिनुभयो । यसैबिच अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाले पनि प्रचण्डसंगै अस्पतालको निरिक्षण गर्नुभएको थियो ।
अस्पतालको आकस्मिक सेवा, ओपिडी, हाडजोर्नी विभाग, प्रसुती विभाग लगाएतको अवलोकन गरेकी राजदुत शेर्पाले अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरुसंग अन्तरक्रिया समेत गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा उहाले अष्ट्रेलियन प्रविधि, त्यहाँका चिकित्सकहरुको ज्ञानलाई नेपाली चिकित्सक र अस्पतालहरुसंग जोड्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाले धेरै नेपाली चिकित्सकहरु अष्ट्रेलियामा राम्रो काम गरेर बसेकोले उनिहरु मार्फत नेपालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको दक्षता र क्षमता बढाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । पहिलो चरणमा ज्ञान आदान प्रदान, दोस्रो चरणमा हाडजोर्नी बिभागका लागि केही उपकरण र अन्त्यमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि सहयोग गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको राजदूत शेर्पाको भनाई थियो ।
सो अवसरमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रबिन खड्का हाडजोर्नी बिशेषज्ञ डा.श्रवण कुमार थापा, प्रसुति बिभाग प्रमुख डा.सुनिलमणि पोखरेल, फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी लगाएतले अस्पतालको बर्तमान अवस्था, समस्या र भावि रणनितिका बारेमा जानकारी राजदूत शेर्पालाई जानकारी गराएका थिए ।
← श्रील‌ंकाका राष्ट्रपति सिरिसेना काठमाडौँमा
भदौ १५ गते चितवनमा शैक्षिक मेला →